बेली बटन छेड्ने कसरी कीटाणुरहित गर्ने - यी सुझावहरू लिनुहोस् बेजिया
नाभि छेड्नेको कीटाणुरहित कसरी गर्ने
सुसाना Godoy | 09/06/2021 12:00 | सुन्दरता
के तपाईंलाई थाहा छ कसरी नाभी छेड्ने को निस्क्रिय पार्ने? किनकि यो एउटा ठूलो श hole्का हो जुन हामीले शरीरमा प्वाल बनाउँछौं र अधिक बनाउँछ, नाभीजस्तै, हामी चाहँदैनौं पनि पर्याप्त मात्रामा मैला हुन्छ। त्यसो भए, आज तपाईं ती सबै सम्भव श doubts्काबाट मुक्त हुनुहुनेछ।
यो बन्द देखाउनको लागि, हामीले सँधै सिफारिसहरूको श्रृंखला अनुसरण गर्नुपर्दछ। ती सबैले संक्रमणलाई फैलिनबाट रोक्नेछ र हामीलाई जतिसक्दो चाँडो हाम्रो रत्न देखाउने अनुमति दिनेछ। हो वास्तवमा, पेशेवरले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्न कोसिस गर्नुहोस् मैले यो तपाईंको लागि गरें किनकी अब हामी हाम्रो सुरूवात गर्दछौं।
1 भेदीलाई कीटाणुरहित गर्न म के गर्न सक्छु
2 नाभि छेड्ने कसरी निको पार्ने
3 नाभि छेड्दा संक्रमित छ कि छैन कसरी भनेर
भेदीलाई कीटाणुरहित गर्न म के गर्न सक्छु
हामीले पहिले नै उन्नति गरिसकेका छौं कि नाभी छेड्ने क्रम अलि गाह्रो हुन सक्छ संक्रमण बाट जोगिन। सबै भन्दा बढि किनकि यो एक क्षेत्र हो जहाँ आँखा झिम्केमा मैला संचय हुन्छ। त्यसैले हामीले यसमा राम्ररी ध्यान दिन आवश्यक छ र हामी प्रत्येक दिन दुई पटक प्रक्रिया दोहोर्याउँदछौं।
यदि तपाईं घाउलाई छोइरहनु भएको छ भने हामीले साबुन र पानीले राम्रो धुनु पर्छ। तर यो एक मा अत्तर छैन तर एक तटस्थ एक को लागी उत्तम।
प्रश्न क्षेत्र को लागी, यो पनि आवश्यक छ यसलाई अलिकता पानी र हल्का साबुनले धुनुहोस्। यद्यपि शारीरिक खारा पनि संकेत गरीन्छ। हामीले यसको साथ स्प्रे गर्नुपर्छ, यो जाँच गर्दै कि यसले प्वाललाई राम्ररी भिजेको छ।
जब यसलाई सफा गर्न आउँछ, तपाईं छेड्नेलाई सार्न सक्नुहुनेछ तर ठूलो सावधानीका साथ र केवल यसलाई बढाउन वा कम गर्न, त्यस बीच बीचमा कुनै क्रस्ट छैन। पहिलो दिनहरू हामीले यो निश्चित गर्नुपर्दछ किनभने त्यो हामीलाई आवश्यक छ।
एकचोटि सफा गरिसकेपछि, हामीले क्षेत्र सुक्नु पर्छ तर हामी तौंली प्रयोग गर्दैनौं वा यस्तै केहि। तर राम्रो गोज र सानो नरम टचहरू दिँदै, तान्दै बेवास्ता गर्नुहोस्, किनकि यसले हामीलाई सताउन सक्छ।
नाभि छेड्ने कसरी निको पार्ने
हामीले भर्खरै उल्लेख गरेका चरणहरू बाहेक, त्यहाँ सधैं केहि महत्त्वपूर्ण छ जुन हामीले सम्झनु पर्छ किनकि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए, यदि तपाईं नाभि छेड्ने उपाय कसरी निको पार्दै हुनुहुन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने, त्यसोभए तपाईंले निम्न सबै कुरा थाहा पाउनुपर्दछ:
यसलाई धुँदा र सफा गरिसकेपछि यो कीटाणुनाशक लागू गर्न पनि उपयुक्त हुन्छ, संक्रमण हुन सक्छ कि रोक्न को लागी। तर घाउमा रक्सी कहिले पनि प्रयोग नगर्नुहोस्।
कानबाट एक छडी र न्यानो पानी मा गिलास संग, तपाईं कहिलेकाँही देखा पर्ने scabs नरम गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई तान्नु र हामीलाई ठूलो घाउ बनाउनुको सट्टा, तिनीहरूलाई अधिक सजीलो हटाउन यो कदम अनुसरण गर्नु सधैं उत्तम हुन्छ।
छेड्ने हटाउने नगर्नुहोस्। हामीले यसलाई जसरी हामीले स indicated्केत गरेका थियौं, तपाईंले यसलाई सार्नु पर्छ, तर यो जहिले पनि स्थानमा छोड्नुहोस् जब सम्म कि डाक्टरले सिफारिस गरेन भने।
हामी घाइतेको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन प्रायः निको हुन समय लाग्छ। त्यसोभए तपाईंले पूलमा जानुभन्दा पहिले दुई वा तीन हप्ता कुर्नु पर्छ र यदि तपाईं जानुहुन्छ भने, क्लोरीनबाट सकेसम्म यसलाई राखेर यसलाई सकेसम्म कभर गर्नु राम्रो हुन्छ।
यस क्षेत्रमा पनि धेरै तंग लुगा न लगाउनुहोस्।, कि गहना को विरुद्धमा रब्ब गर्न सक्दछ वा यो समातिन पनि सक्छ। किनभने झिकाहरू उपचार प्रक्रियाको क्रममा राम्रो छैन।
नाभि छेड्दा संक्रमित छ कि छैन कसरी भनेर
यो सत्य हो कि सबैले उस्तै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दैनन्। तर हो, जब हामी छेड्ने संक्रमणको बारेमा कुरा गर्छौं, तब हामी स्पष्ट हुन्छौं कि त्यहाँ लक्षणहरूको एक श्रृंखला छन् जुन हामीले बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
पेट बटन सामान्य भन्दा रातो हुनेछ। यद्यपि यो सत्य हो कि पहिलो दिन यो हुन सक्छ र संक्रमण बिना।
तपाईंले यस क्षेत्रमा अधिक गर्मी देख्नुहुनेछ र तपाईं केही सूजन देख्नुहुनेछ।
साथै, जब तपाइँ यसलाई छुनुहुन्छ यसले चोट पुर्याउँदछ र पुस शुरू हुन्छ एक उपस्थिति बनाउन।
पहिले नै धेरै चरम अवस्थामा, यसले थोरै ज्वरो दिन सक्छ, तर यो पक्कै पनि सामान्य कुरा होइन। यदि हो भने, त्यसो भए तपाईले आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्छ।
सबै समयमा तपाईसँग अलिकता धैर्यता हुनुपर्दछ, किनकि यो एक घाउ हो र यसले पूर्ण रूपमा निको हुन धेरै हप्ता वा महिना लिन सक्दछ। अब तपाईंलाई थाहा छ कसरी नाभी छेड्ने को निस्क्रिय पार्ने!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » नाभि छेड्नेको कीटाणुरहित कसरी गर्ने
किचेन रोबोट, मैले कुन छनौट गर्नु पर्छ?
शक्ति संघर्षले दम्पतीलाई कसरी असर गर्छ